EIBOARD LED Recordable Smart Blackboard သည် မာလ်တီမီဒီယာဒစ်ဂျစ်တယ်စာသင်ခန်းထုတ်ကုန်၏ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် စမတ်ကျသောသင်ကြားမှု၊ ပေါင်းစပ်ရိုးရာစာရေးဘုတ်နှင့် စမတ်စာသင်ခန်းဖြေရှင်းချက်အသစ်ကိုဖန်တီးရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ချောမွေ့မှုမရှိသော အရေးအသားပုံစံနှင့် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ၊ ၎င်းသည် ရိုးရာကျောက်သင်ပုန်းအရေးအသားအကြောင်းအရာကို e-content အဖြစ် လွယ်ကူစွာ သိမ်းဆည်းနိုင်စေပါသည်။ရရှိနိုင်သော အရွယ်အစားများမှာ 146" 162" နှင့် 185" ဖြစ်သည်။
EIBOARD LED Recordable Smart Blackboard သည် smart classroom ဖြေရှင်းချက်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အယူအဆအသစ်ဖြစ်သည်။
စမတ်ကျောက်သင်ပုန်းသည် ဖြေရှင်းချက်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက် ရိုးရာကျောက်သင်ပုန်း၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသောဘုတ်နှင့် ဦးဆောင်သော ထိတွေ့ပြားချပ်ချပ်ပြားကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
၎င်းသည် ရိုးရာကျောက်သင်ပုန်းရေးသားသည့်အကြောင်းအရာကို e-အကြောင်းအရာအဖြစ် လွယ်ကူစွာ သိမ်းဆည်းနိုင်စေပါသည်။
ချောမွေ့မှုမရှိသော အရေးအသားနှင့် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင် ဒီဇိုင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူအများအပြားကို အလုပ်မုဒ်များစွာဖြင့် တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
အသုံးပြုသူများသည် လက်ချောင်း၊ ဘောပင်၊ မြေဖြူခဲများဖြင့် တစ်ပြိုင်နက် ရေးနိုင်သည်။
LED မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော စမတ်ကျောက်သင်ပုန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မသိမီ၊ မာလ်တီမီဒီယာ စာသင်ခန်းဖြေရှင်းချက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်း အောက်တွင် ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ရှုပါ၊ ထို့နောက် LED မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော စမတ်ကျောက်သင်ပုန်း မည်သို့ပေါ်လာကြောင်းနှင့် စာသင်ခန်းများက ၎င်းကို အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်ကြောင်း သိရှိမည်ဖြစ်သည်။
အရင်တုန်းကတော့ မာလ်တီမီဒီယာ ဒစ်ဂျစ်တယ် စာသင်ခန်းအတွက် မျိုးဆက်သစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ၄ ခု ရှိခဲ့ပါတယ်။
1. 1st Generation သည် ရိုးရာဒစ်ဂျစ်တယ်စာသင်ခန်းဖြစ်ပြီး ပရိုဂျက်တာစခရင်၊ ပရိုဂျက်တာ၊ ဒက်စ်တော့ကွန်ပြူတာ၊ ဘလက်ဘုတ် သို့မဟုတ် အဖြူရောင်ဘုတ်၊ စင်မြင့်နှင့် စပီကာများဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ထိတွေ့နိုင်သော စခရင်တစ်ခုမှမရှိသောကြောင့် ဖြေရှင်းချက်သည် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ၊ ပြသခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ PC mouse နှင့် ကီးဘုတ်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
2. 2nd Gen သည် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော အဖြူရောင်ဘုတ်၊ ပရိုဂျက်တာ၊ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မာလ်တီမီဒီယာ အားလုံးကို တစ်ခုတည်းသော PC၊ ဘလက်ဘုတ် သို့မဟုတ် အဖြူရောင်ဘုတ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည့် ရိုးရာစမတ်စာသင်ခန်းဖြစ်သည်။ဖြေရှင်းချက်သည် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ Multi touch၊ ခေတ်မီပြီး စမတ်ကျသည်။အဆိုပါဖြေရှင်းချက်သည် ပညာရေးဈေးကွက်ကို 15 နှစ်ကျော်ကြာ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး လူကြိုက်များခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ၎င်းကို မျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်များ (LED အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော panel displays) များဖြင့် အစားထိုးထားပြီး စနစ်သည် အနည်းဆုံး ထုတ်ကုန်4ခုကို သီးခြားစီတပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းသည် HD ရောင်စုံကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲ၊ အတွေ့အကြုံ။
3. တတိယမျိုးဆက်ဖြေရှင်းချက်မှာ ကျောက်သင်ပုန်း သို့မဟုတ် အဖြူရောင်ဘုတ်ပါရှိသော LED အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သော ပြားချပ်ချပ်အပြားဖြစ်သည်။3rd smart board solution သည် တလုံးတည်းဖြစ်ပြီး၊ ပရိုဂျက်တာနှင့် ကွန်ပြူတာ ပြင်ပချိတ်ဆက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ တပ်ဆင်အသုံးပြုရ ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။သို့သော် စနစ်သည် သီးခြားစီ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ရန် ထုတ်ကုန် ၂ မျိုး လိုအပ်နေသေးသည်။
4. 4th Gen solution သည် အားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် Nano smart blackboard ဖြစ်ပြီး မည်သည့်စာရေးဘုတ်ကိုမျှ ဝယ်ယူရန် သီးခြားမလိုအပ်ပါ။မြေဖြူခဲစာရေးနည်းအတွက် မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး ပိုကြီးပြီး ချောမွေ့မှုမရှိပါ။သို့သော် စမတ်ကျောက်သင်ပုန်းသည် ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်ရှိ စာရေးမှတ်စုများကို မှတ်တမ်းတင်၍ မသိမ်းဆည်းနိုင်ဘဲ၊ မှတ်စုများကို ရေးသားပြီးပါက ဖျက်ပစ်ပါသည်။
5. 5th Gen solution သည် 2018 ခုနှစ်တွင် V1.0 မှထွက်ရှိခဲ့သော ဗားရှင်း4ခုပါရှိသော EIBOARD LED Recordable Smart Blackboard ဖြစ်ပါသည်။ V3.0 နှင့် V4.0 တို့သည် လူကြိုက်များပြီး တန်ဖိုးရှိပါသည်။၎င်းသည် တစ်ကယ့်ကို all-in-one ဖြင့် အသစ်ရေးဆွဲထားသည်။၎င်းသည် အထက်ပါ ဖြေရှင်းချက်4ခု၏ နာကျင်မှုအချက်အားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးပြီး အထက်ဖော်ပြပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု4ခုထက် ကျော်လွန်ပါသည်။
LED Recordable Smart Blackboard တွင် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော Smart Board၊ Projection၊ School Chalkboard၊ LED Interactive Touch Display၊ Nano blackboard၊ Speakers၊ Visualizer၊ Controller၊ Pen Tray စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံး ပါရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်ချက်များအပြင်၊ ပိုမိုထူးခြားသော ဒီဇိုင်းများပါရှိသည်။
1) LED Recordable Smart Blackboard သည် အလုပ်မုဒ်များစွာတွင် e-အကြောင်းအရာအဖြစ် လက်ရေးမှတ်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး အမြန်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
2) သိမ်းဆည်းထားသော အီး-အကြောင်းအရာသည် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကျောင်းသားများအား အလွယ်တကူ မျှဝေရန်နှင့် မိဘများအတွက် ကျောင်း cloud ပလပ်ဖောင်းသို့ ကလေးများ သင်ယူမှုတွင် သွန်သင်ဆုံးမရန်။
3) စာရေးဘောင်မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့မှုမရှိသောဒီဇိုင်းဖြင့် အလွန်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အဖြစ် 100% အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
3) မျက်နှာပြင်ခွဲအဖြစ် ဘယ်နှင့်ညာ စာရေးဘုတ်မျက်နှာပြင်၊ ရွေးချယ်ခွင့် အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်၊ ဥပမာ။အမှတ်အသားဘုတ်၊ မြေဖြူခဲဘုတ်၊ ကျောက်သင်ပုန်း၊ အဖြူရောင်ဘုတ်၊ အစိမ်းရောင်ဘုတ်စသည်ဖြင့်..စခရင်အသေးစားအရွယ်အစားများကို ပင်မစခရင်အရွယ်အစားအလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
4) ပင်မစခရင်အဖြစ် အလယ် LCD အကန့်အား အမှတ်အသား သို့မဟုတ် မြေဖြူခဲဖြင့် ဘုတ်မျက်နှာပြင်စာရေးအဖြစ် ရေးသားနိုင်ပြီး ဖျက်ရလွယ်ကူသည်။
5) ရရှိနိုင်သောအရွယ်အစား: 146 လက်မ၊ 162 လက်မနှင့် 185 လက်မ
LED မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော Smat Blackboard အကြောင်း နောက်ထပ်ဘာတွေလဲ။
ပညာရေးအတွက် မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆို ပညာရေးကဏ္ဍရှိ ပါတီအားလုံးက စဉ်းစားသင့်သည်။LED မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော စမတ်ကျောက်သင်ပုန်းသည် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ခေတ်မီစမတ်စာသင်ခန်းဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲစျေးကွက်အတွက် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းသစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ခေတ်မီစာသင်ခန်းများသည် သင်ကြားမှုပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ပြေစေရန်၊ သင်ခန်းစာများကို ထိရောက်စေရန်အတွက် အသစ်အဆန်းများနှင့် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
အရေးကြီးသောမှတ်စုများ မလွတ်သွားစေရန် စာသင်ချိန်အပြီးတွင် သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လွယ်ကူပါသည်။
အထူးသဖြင့် မူလတန်းနှင့် ပထမတန်းအဆင့်ရှိ ကျောင်းသားများသည် အိမ်စာအတွက် မိဘများ၏ အကူအညီ လိုအပ်ပါသည်။ကျောင်း cloud ပလပ်ဖောင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ပြီး အပ်လုဒ်လုပ်ထားသော သင်ကြားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် မိဘများအတွက် ကျောင်းများတွင် ၎င်းတို့၏ကလေးများသင်ယူခဲ့ရာနှင့် အိမ်စာကျူရှင်နည်းကို စစ်ဆေးရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။
ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို အမြင့်ဆုံးချွေတာရေး၊ ဆရာများ၏ စက်ကိရိယာအသုံးပြုမှုနှုန်းကို တိုးမြှင့်ကာ မာလ်တီမီဒီယာ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုးကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေချိန်တွင် ကျောင်းများသည် ထူးချွန်သော ဆရာများ၏ သင်ကြားရေးအရင်းအမြစ်ကို အခြားသူများထံ မျှဝေပြီး သင်ယူနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
5) MOE နှင့်အစိုးရအတွက်
ကျောင်းအများစုသည် စာသင်ခန်းများတွင် မာလ်တီမီဒီယာဒစ်ဂျစ်တယ်ဘုတ်အဖွဲ့ဖြေရှင်းချက်များကို ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်နိုင်သည်။သို့သော် ၎င်းတို့အများစုမှာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် အခြေခံဗားရှင်းဖြင့် တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ စနစ်တစ်ခုလုံးသည် ပြီးပြည့်စုံပြီး အဆင်ပြေမှုမရှိကြောင်းနှင့် ဆရာများ၏ အသုံးချမှုနှုန်းမှာ မမြင့်မားသောကြောင့် ဖြုန်းတီးမှုဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်၊ ဤစက်ပစ္စည်းများကို အချိန်အတော်ကြာ ထည့်သွင်းထားနိုင်သော်လည်း အများစုမှာ အသုံးပြုရန် မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ ပြင်ဆင်ပြီး အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။အချို့သော စာသင်ခန်းများတွင် မာလ်တီမီဒီယာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘုတ်စနစ်ကို ဘယ်သောအခါမှ တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင် တန်ဖိုးရှိပြီး ထိရောက်သော ဖြေရှင်းချက်အသစ်များလည်း လိုအပ်ပါသည်။LED မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော စမတ်ကျောက်သင်ပုန်းဒီဇိုင်းသည် ဤပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။၎င်းသည် ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို အမြင့်ဆုံးချွေတာနိုင်ပြီး၊ ဆရာမများ၏ စက်ကိရိယာအသုံးပြုမှုနှုန်းကို တိုးမြှင့်ကာ မာလ်တီမီဒီယာ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
စမတ်စာသင်ခန်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏ နှစ်ရှည်လများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုတွင်၊ ရှိပြီးသား ဖြေရှင်းနည်းများအားလုံးသည် သာမာန်ဖြစ်ပြီး စည်ကားသော ပြိုင်ဆိုင်မှုအောက်တွင် အမြတ်အစွန်းများနှင့်အတူ ၀င်ငွေများပါရှိသည်။လေလံဆွဲခြင်း အားသာချက်များနှင့် ပိုမိုလွယ်ကူသော စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက် ထူးခြားသောဖြေရှင်းချက်အသစ် လိုအပ်ပါသည်။ခိုင်မာသော R&D ခွန်အားနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသော ထုတ်လုပ်သူသည် ပံ့ပိုးမှုအဖြစ် အလွန်လိုအပ်ပါသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် LED မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော စမတ်ကျောက်သင်ပုန်းသည် ပညာရေးဈေးကွက်အတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ EIBAORD အဖွဲ့သည် ပညာရေးဈေးကွက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော စမတ်ကျောက်သင်ပုန်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် တန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်များရရှိစေရန် အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမည်။
ယခင်- LED အပြန်အလှန်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
နောက်တစ်ခု: Smart Blackboard FC-185EB
ပစ္စည်းအမည် LED Recordable Smart Blackboard
2159 * 1214 မီလီမီတာ
အလေးချိန် (NW / GW)
LED Panel အရွယ်အစား ၇၅"၊ ၈၅"၊ ၉၈"
ပြသကာကွယ်မှု Tempered ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံမှန်4မီလီမီတာ
TV (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) ပုံဖော်မတ်- PAL/SECAM/NTSC (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) ;ချန်နယ်သိုလှောင်မှု ၂၀၀
ကျောက်သင်ပုန်းအမျိုးအစား အစိမ်းရောင်ဘုတ်၊ Blackboard၊ Whiteboard တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဖြတ်လမ်းများ လွယ်ကူမြန်ဆန်သော လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ဖြတ်လမ်း ၉ ခုမျက်နှာပြင်ခွဲခြင်း၊ အပြာရောင်ဘောပင်၊ ကလောင်နီ၊ စာမျက်နှာသစ်၊ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ၊ နောက်စာမျက်နှာ၊ ဘုတ်လော့ခ်၊ မှတ်ဉာဏ်မှတ်တမ်း၊ QR ကုဒ်
စာရေးကိရိယာ မြေဖြူခဲ၊ အမှတ်အသား၊ လက်ချောင်း၊ ဘောပင် သို့မဟုတ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသော အရာများ
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် Android စနစ် Android 6.0
CPU (ပရိုဆက်ဆာ) CORTEX A53 Quad Core 1.5GHz
သိုလှောင်မှု RAM 2GB ;ROM 32G;
သိုလှောင်မှု မမ်မိုရီ- 8G (4G/16G စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်)။HDD- 256G SSD (128G/512G/1TB ရွေးချယ်နိုင်သည်)
အရာများကို ထိပါ။ ပင်မစခရင်နှင့် မျက်နှာပြင်ခွဲများသည် တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အရှေ့ဆိပ်ကမ်းများ USB2.0*3၊ HDMI*1၊ USB*1 ကိုနှိပ်ပါ။
Back Ports များ HDMI*1,VGA*1,RS232*1,Audio*1,MIC*1,Earphone*1,USB2.0*4,RJ45 in *1,RJ45 OUT*1,OPS Slots*1
လုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ်များ ရှေ့ဘေးဘောင်ရှိ ခလုတ် ၈ ခု- ပါဝါ၊ အရင်းအမြစ်၊ မီနူး၊ အသံအတိုးအကျယ်+/-၊ ပင်မ၊ PC၊ Eco
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါကြိုး* 1 PCs;Touch Pen*1 pcs;အဝေးထိန်းကိရိယာ*1 pcs;QC ကတ်* 1 PCs;ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ* 1 pcs ;အာမခံကတ်* 1 pcs;နံရံကွင်းများ*၁စုံ